मतदानपछि मतगणनाक्रममा मतदाताको मन
एक मतदाताले लोकतन्त्रमा राख्ने सामान्य आशाको अधिकार
राज्यले तोकेको उमेर पुगेपछि प्रायः हामी सबैले मतदानमा सहभागी भएर नेता चुन्ने कार्यमा राज्यलाई सहयोग गर्दै आईरहेकै छौं । विशेष गरेर बहुदलीय व्यवस्थापश्चात यो क्रम प्रत्येक पाँच वर्षमा चलिनै रहेको छ । प्रायः संसारका लोकतान्त्रीक मानिएका राष्ट्रहरुमा यही चुनावी प्रकृया छन् ।
२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपश्चात पनि कतिपय राजनैतिक अधिकार र जनतामै राष्ट्रको सार्वभौमिक अधिकार सुनिश्चितका लागि भनेर विभिन्न आन्दोलन भईरहे । यिनै आन्दोलनका उपलब्धीस्वरुप देश संघीय गणतन्त्रसम्मको अवस्थामा आईपुगेको छ । संघीय गणतन्त्रका अभ्यास गरिरहेको हाम्रो देशमा यो स्थानीय निर्वाचन दोश्रो हो । पहिलो स्थानीयस्तरको चुनाव एक प्रकारले स्थानीय शासनप्रणाली व्यवस्थित गर्ने नयाँ अभ्यास पनि थियो । पाँच वर्ष अगाडिको चुनावमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले आ आफ्ना क्षेत्रहरुमा आफ्ना बलबुँताले भ्याएसम्मका कामहरु पनि गरे । कतिपय पहिला भङ्ग भएका विभिन्न बिभागहरुको व्यवस्थापन भने अझैसम्म पनि व्यवस्थित भइसकेको छैनन झैं लाग्छ । उदाहरणको रुपमा शिक्षा विभाग, महिला विभाग (यी विभागहरु लामो समयसम्म पनि सक्रिय भएका थिएनन्) । प्रायः स्थानीय गाउँपालिकाहरुका विभिन्न विभागसहितका ठूला ठूला भवन कतै निर्माण भइसकेका छन् भने कतै निर्माणधिन नै छन् । बाटो सहज लाग्ने तराई क्षेत्रमा अझ फराकिला बाटाहरु, ठूलठूला भवनहरु स्थानीय विकासका धरोहर झैं लाग्छन् । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा पनि स्थानीय स्तरमै डोजर लगायतका बाटो खन्न प्रयोग हुने मेसिनहरु राखेर भत्केका बाटो टाल्ने या नयाँ बाटो खोल्ने काम पनि निरन्तर भईरहेकै छन् । डोजर त कतिपय स्थानमा स्थानीय प्रतिनिधिहरुले आफ्नो सम्पतिको रुपमा क्रय गरेका भन्ने समाचारहरु पनि नआएका होईनन् । भौतिक संरचनाको दृष्टिकोणले स्थानीय सरकारको पाँचवर्षलाई हेर्ने हो भने गतिशिल नै मान्न पनि सकिन्छ । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकको भलाईका कार्यक्रमहरु भने सोचेजस्तो भएको पाईदैन ।
स्थानीयस्तरमा जति पनि महिलाहरु चुनिएका थिए उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा सक्रियतासाथ नै काम गरेको, जनताको सहयोग गरेको पनि पाईयो । तर यो पटकको चुनावमा महिला प्रतिनिधिको संख्या अझ कम भएको तथ्याकं आएको छ । यसबाट महिलाको राजनीतिमा सहभागिताको नारा र महिला शसक्तिकरणका कार्यक्रमहरुलाई असर नै गर्ने देखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनतालाई सर्वेसर्वा मानी जनताका आवाज लिएर काम गर्नेलाई जनताले रुचाउँछन् । तर हाम्रो देशमा पाँच वर्षभित्र राजनैतिक सामाजिक क्षेत्रमा अनेक उतारचढावहरु आए । दलित, महिला लगायत भूँईमान्छेहरुका आवाजहरुलाई अनसुनी पनि गरियो । केन्द्रीयस्तरको नेतृत्वका बीचका मतभेद, विभाजन, परित्याग जस्ता क्रियाकलापले सम्पूर्ण देशमा नै अन्यौल र जनतामा निराशाको बादल पनि मडारिईरहे । फलस्वरुप बहुमतको सरकार विघठन भई नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । जसलाई जनताले पाँचवर्षको लागि भनेर चुनेर पठाएका थिए उक्त नेतृत्व नै असफल भयो । यो प्रसङ्गले ठूलो मानिएको दल नै विभाजन भयो । यो सबै दृष्य हेरिरहेका जनतामा एकप्रकारले राजनैतिक नेतृत्वप्रति वितृष्णा पनि जगायो । यस्तै यस्तै गरी चलिरहेको हाम्रो देश विगत अढार्इ वर्षदेखि त संसारमै फैलिएको कोरोना महामारीको चपेटामा नराम्ररी भासियो ।
पाँच वर्ष बितिसकेको अवस्थामा स्थानीय चुनाव हुने हो कि नहुने होको संसयमै २०७९ सालको बैशाख ३० गते स्थानीय चुनावको घोषणा र चुनाव सम्पन्न नै भयो । छिटपुट दुर्घटना र एकआपसका द्धन्दबाहेक अरु ठूला घटना घटेनन् भन्नुपर्छ यो चुनावमा । चुनाव प्रचार लगायतका खर्चहरु देख्दा यी खर्चहरु कहाँबाट आउँछन् ? धनसम्पति, पैसा नहुने व्यक्तिहरुको नेता हुने,या नेतृत्व तहमा पुग्ने बाटो बन्द नै हो त ? चुनाव सकिएपश्चात पुन नेताहरु द्रव्यमोहजालमा परेर बोकेको एजेण्डा र स्थानीय विकासका मुद्धाहरु नै भुल्ने त होइनन् ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरुसहित स्थानीयस्तरको चुनावमा जनताले मतदान गरे । कतिपय राजनैतिक दल तथा व्यक्तिहरुले यो मतदानमा भाग नै लिएनन् । काठमाडौंमा पनि झण्डै पचास प्रतिशत मतदाता मतदान गर्नै गएनन् भन्ने समाचार पनि आए ।
जे होस्, चुनाव सम्पन्न भयो । यसका घाटानाफाहरु त देखिई नै हाल्नेछ । तर मतपत्रको भद्दापन, मतदाता शिक्षाको कमी, गठबन्धनका उम्मेद्वारबारे मतदाता अनभिज्ञ हुनु यो चुनावमा सम्बन्धित पक्षको कमजोरी हुन् । मतदान कार्यलाई बुझिने चुस्त दुरुस्त मतपत्र या डिजिटल प्रणालीको व्यवस्था हाम्रै पालामा देख्न पाईन्छ कि हाम्रा आउँदा पुस्ताले पनि देख्न पाउलान या नपाउलान् । यो प्रश्न पनि मननीय नै छ ।
जित्नेहरु फुर्किएर भूँइमा न भाँडामा अनि हार्नेहरु आवेश, निराश र चिन्ताले पीडित नबनुन् । चुनाव भनेकै हारजितको खेल हो र यदि अलिकित पनि राम्रो काममा ध्यान दिए जनता त उदार छन्, मतदान गरेर आफ्नो क्षेत्रको प्रतिनिधि बनाई नै हाल्छन् । मुख्य कुरो प्रतिनिधिले साम, दाम दण्ड, भेदको नीतिमात्र अख्तियार गर्नुभएन् । जनताको सेवक हूँ भन्ने नारामात्र पनि लाउनु भएन् । साँच्चै जनपक्षीय काम गर्नुपर्यो ।
यस चुनावमा राजनैतिक दलहरुले टिकट नदिएका उम्मेद्वारहरु, स्वतन्त्र या वागीको रुपमा पनि स्थानीय प्रतिनिधिको रुपमा उठेका छन् । लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीमा यो पनि व्यक्तिको अधिकारको कुरो भयो । केही नयाँ अनुभूति खोजिरहेका मतदाताहरुले यो प्रकृृयालाई पनि निकै समर्थन गरिरहेका छन् । स्वतन्त्र भन्ने वितिकै स्वच्छन्द तरिकाले आफ्ना कार्य सम्पन्न गर्ने होईन् । स्वतन्त्र प्रतिनिधिले पनि राजनीतिले दिशानिर्देश गरेका र राजनैतिक प्रणालीसँग, देशको संविधान, कानुन अन्तर्गत नै सञ्चालिन हुनुपर्छ । यसरी स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएर निर्वाचित भएका युवाहरुले साँच्चै अग्रगामी काम गरेको देख्न पाईयोस् ।
हाम्रा नाराहरु त प्राय समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई पछ्याउने छन तर सिमित व्यक्ति झन् धनी बन्ने, गरीब झन गरीब बन्ने प्रकृया भने बढेकै छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय स्तरमै उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यका निकायहरुलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने लगायत हरेक विकासका पहूँचबाट पछाडि पारिएका, परेका वर्गलाई उकास्न विशेष पहल गरोस्, यस स्थानीय चुनावबाट निर्वाचित प्रणालीले । एक सामान्य मतदाताले यो भन्दा बढी के नै आशा गर्न सक्छ र ?